पुल नबन्दा पढ्नै पाएनन् विद्यार्थीले - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
पुल नबन्दा पढ्नै पाएनन् विद्यार्थीले
‘गरिब आमाको कोखमा जन्म भएपछि मन भएपनि बिद्यालय जान नपाईने रहेछ’, यो भनाई हो बझाङको काडा गाविसस्थित १४ बर्षीया राजेन्द्र बोहराको । काँडा माबिमा कक्षा ८ मा पढिरहेका छन् उनी । एक बर्षमा जम्माजम्मी ३ महिना मात्र बिद्यालय जानु उनको रहर हैन, बाध्यता हो । बोहरा भन्छन्–‘घर काँडा ९ निउना हो, घरबाट हेर्दा आमने सामने जस्तै देखिन्छ, बिद्यालय जान पूरै दिन लाग्छ । सेतीमा पुल छैन, डेरा गरि बसौं भने पैसा छैन बिद्यालय जाने समयमा घरमै साथिभाईसँग गाई गोठालो जान्छु । सधै फागुन, चैत्र र कार्तिकमा मात्र बिद्यालय जाने गरेको छु । यो सबै गरिब परिवारमा जन्मेर हो । धनि भए त सदरमुकामको बिद्यालयमा पढ्न पाईन्थ्यो होला ।’ उनको यो भनाई सुन्दा जोसुकैको मन पनि एकपल्छ चसक्क हुन्छ, तर यो यस क्षेत्रका आम मानिसको साझा समस्या हो ।
‘बिद्यालय जान मन थियो, सेती नदिमा पुल बनेको छैन, हिँडेर जाउँ भने एक घण्टाको बाटोमा पूरै एक दिन लाग्छ । हिउँदमा चिसोको बिदा बर्खायाममा सेती नदिले बिदा दिन्छ भने कहिले यार्सा टिप्न स्थानिय बिदा हुन्छ अरुदिनमा बिद्यालयमा पढाई भईरहन्छ, हामी सधै पढ्नबाट बञ्चित भएका छौं’, काडाँ ९ निउना घर भई काडाँ माबि कक्षा ९ मा अध्यनरत छात्र कर बोहराले भने–‘छिमेकी गाबिसको बिद्यालय दुर्गा उमाबिमा जान डेढ दिन लाग्छ, सदरमुकाम दुई दिन पैसा छैन कहिँ जान सकिँदैन अब ९ सम्म पढियो पुल नहुँदा बिद्यालय छोडनु बाहेक अरु बिकल्प छैन ।’ गाउँमा अहिलेसम्म पनि एक जनाले १० पास गरेको छैन । धेरै पढ्ने ९ कक्षासम्म पुगेका छन् काँडा गाउँमा । गाउँमा गरिबी सबैको समस्या बनेको छ,अनि सँधै हिड्ने पुल । बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने समस्या छ गाउँमा । बिकटको ठाउँ भएकाले पनि कसैले पुलको लागि पहल गरेको छैन । गाउँमा करिब ८३ परिवारमा सबै अशिक्षित छन् भने पुलको लागि आएको सामान पन िबिच बाटैमा अलपत्र छन् । गाउँलेको समस्या कसैले नबुझेको धौल्या बोहराले बताए । उनले भने–‘जो आए पनि गाँउमा हकार्छन् । हामी केहि बोल्न सक्दैनौं तिमीहरुको पुल हो आफैं बनाउ भन्छन्, हिउँदमा बनाएको काठेपुलबाट बर्सेनि दुई तिन जनाको ज्यान जाने गरेको छ ।’
काडाँ गाबिस वडा नं. ४ र ९ को बीचमा रहेको तपवन भने ठाउँमा तिन बर्षदेखि झुलङ्गे पुल बनाउने भनेर काम गराए । पहिले प्राबिधिकले ७१ मिटर भने पछि ९२ मिटरको काम भने जहाँको त्यहिँ छ । गाउँले र बिद्यार्थी पुल अभावमा आवतजावत गर्नसमेत बञ्चित भएका छन् । पुल निर्माण समितिका सचिब तथा काडाँ माबिका स्थानिय शिक्षक गोरख बोहराले भने–‘काम गराउने जिम्मेवारी पाएको सामाजिक तथा प्राबिधिक बिकास सेबा समुहले कति लागतको हो स्टमेट र पैसासँगै प्राबिधिक दिएको छैन । काम गर भन्ने गरेको छ, कर्मचारी कोहि आउँदैन । कसरी काम हुन्छ ? सामान बीच बाटामा जहाँको त्यहि अलपत्र परेको छ । नौ लाख खर्च भईसक्यो ।’
निउना गाउँका सबै तहमा गरि ४३ जना बिद्यार्थी थिए, अहिले सेतीनदिमा पुल नभएपछि बिद्यालय आउन छाडेका छन् । काँडा गाबिसको लिस्नेगाडमा पनि पुलको जिमेवारी पाएको सामाजिक तथा प्राबिधिक सेबा समुहले पुल निर्माण गरेको छैन । जिल्लाका सबै गाबिसको बिपिएल अन्तरगत झुलङ्गे पुल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी समुहले पाएको छ ।
जिल्लाकै दुर्गम बिकट काँडा गाबिसमा नत कुनै एनजिओ, आईएनजिओले काम गरेका छन् नत सरकारी पक्षबाट नै कुनै ठोस सहयोग भएको छ । गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षासँगै बिकासको दृष्टिकोणले निकै पछाडि परेका यस भेगका बासिन्दाको मुख्य पेशा भेडा पालन हो । काँडाको बेजट अधिकाँश एनजिओले कागतमै सीमित गरि कागतमात्र भर्ने गरेको र गाउँमा नआउने गरेको स्थानियको गुनासो छ । गाउँलेहरुको एउटै आवाज छ, ‘कित हामीलाई चिनियाँ भन हैन भने विकास देउ ।’ झोलङ्गे पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सामाजिक तथा प्राबिधिक बिकास सेबा समुहले भने स्थानियवासीको लापरवाहीले पुल समयमा नबनेको जनाएको छ । समयमा पुल नबनेर स्थानियलाई परेको समस्याप्रति जिल्ला बिकास समिति निकै दःुखित भएको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । यसै आर्थिक बर्षभित्र पुल निर्माण गर्ने सम्बन्धित संस्था र उपभोक्ता समितिलाई बोलाई काम गराउने स्थानिय बिकास अधिकारी गणेश प्रसाद शाहले बताए । उनले भने–‘कामको जिम्मेबारी लिनेले काम पनि गर्नु पर्छ ।’
लिष्नी खोलामा पुल नहुदा काठे पुलमा जोखिम मोलेरै पुल तर्दै स्थानीय । तस्बिर ललित सिहं